पेट्रोल भर्न कहिलेसम्म सास्ती खेप्ने ?
निश्चल स्थापित, अनामनगर काठमाडौं print
म एउटा निजी कम्पनीमाको मार्केटिङ अफिसर हुँ। मार्केटिङको लागि बजारमा नगइ हुन्न। त्यसैले सजिलोको लागि बाइकमै हिँड्नु पर्ने बाध्याता छ। देशको हालत यस्तो छ, तराईमा सामान्य बन्दको हल्ला चल्नासाथ काठमाडौंका पेट्रोल पम्महरुमा लाइन लाग्न शुरु हुन्छ।
कहिलेकाँही त घण्टौसम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नै आउँछ। पैसा तिरेर पेट्रोल हाल्ल पनि कहिलेसम्म यस्तो सास्ती खेप्नु पर्ने? काठमाडांैमा इन्धन भण्डारणको क्षमता बढाउन सकिँदैन? यस्तो कुरामा सम्बन्धित निकायको ध्यान गए जनताले राहत पाउने थिए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र १, २०७३ १७:३३:३१